YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, April 11
တွဲလက်များ - ထူးအယ်လင်း + မီးမီးခဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/11/20120အကြံပြုခြင်း
ဧပရယ် ၂ ရက်နေ့က ရုံးချူပ်ရှေ့မှာ ဒေါ်စု ကားရောက်တာနဲ့ ထိုအမျိုးသမီးက စံပယ် ပန်းကုံးလှမ်းပေးတာပါ။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ(ရုပ်-သံ)
ဒီကနေ ဧပြီလ ၁၁ရက်နေ့မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ထုတ်ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာပါ ဦးခင်ညွှန်ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ မှားယွင်းနေကြောင်း ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဦးမြင့်ရွှေကဘန်ကောက်ပို့ စ်ရဲ့ အလွတ်တန်းသတင်းထောက်ဆိုတာညွန့် ညွန့် မသိလိုက်တာပဲ..
" ခင်ဗျားတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမှာတုံး" ....
၁၁-၄-၂၀၁၂ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မရောက်မီ ညပိုင်း ( ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း )
ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုလုပ်နေရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က ရဲချုပ်တွေ ဘယ့်နဲ့လုပ် နေကြထိုင်ကြရတော့မှာလဲ။
Maungmaung Skw facebook
By featured, အောင်ဇော် on April 11, 2012 7:04 pm in သူ့အတွေး သူ့အမြင် /
သတင်းထောက်တချို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ညစာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံ
လမ်းကြောင်းတွေနောက် တစ်လျှောက်လုံးလိုက်ပါခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာ သတင်းထောက်တချို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့ညနေ ၆ နာရီမှာ သူမရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းထဲကို ဖိတ်ကြားပြီး ညစာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့တဲ့ပွဲမှာ သတင်းခရီးစဉ်တွေနောက် လိုက်ဖော်လိုက်ဖက် ရဲဘော်ရဲဘက် ကျနော်တို့သုံးဦးပါ။
၀ဲမှယာ- သန်းထိုက်အောင်(Messenger News) ၊ ဥက္ကာကိုကို(7DayNews)၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဖိုးစိုင်း(လျှပ်တပြက်/မော်နီတာ)
မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်း ဒေသ ဆူနာမီလှိုင်း ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်မှုမရှိသေး
ဧပြီ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ညနေ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်-YPI
ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၈ မိနစ်တွင် အင်ဒိုးနီးရှား နိုင်ငံအာချေးဒေသကို ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်သွားသည့် အင်အားပြင်းထန်သည့် ငလျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆူနာမီရေလှိုင်း ရောက်ရှိနိုင်သည့် ဒေသများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသများလည်း ပါဝင်လျှက်ရှိသော်လည်း မည်သည့် သတိပေးချက်မျှ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများကပြောသည်။
ပြင်ခရိုင် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ဦးအာရ်ဇားက “ငလျင်လှုပ်သွားတာသိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ ရေဒီယိုကို နားထောင်နေကြတယ်။ ဘာသတိပေးချက်မှတော့ မကြားရသေးဘူး၊ လူတွေတော့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ပြောဆိုနေကြတာပဲ ရှိသေးတယ်” ဟုပြောသည်။
အလားတူ ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ ရေ၀တီတည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင် ဦးစန်းရွှေကလည်း ငလျင်လှုပ်ခတ်သည်ကို မသိရှိကြပဲ ဆူနာမီလှိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်သည်ကိုလည်း မကြားသိရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေ ဆည်းဆာနီ တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင် ဦးမောင်မြိုင်ကမူ “ငလျင်လှုပ်တာတော့သိတယ်။ အန္တရာယ် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူး” ဟု YPI သို့ပြောသည်။
ဆူနာမီလှိုင်း အန္တရာယ် သက်ရောက်နိုင်သည့် နိုင်ငံများအထဲတွင် ငလျင်ဗဟိုချက်ပြုရာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံအပြင် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ မော်လ်ဒိုက်ဗ် နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်ဟု CNA သတင်းဋ္ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ယင်းသတင်းဋ္ဌာနမှ ဖေါ်ပြချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အက်ဒမန် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့်နေရာသို့ တိမ်းရှောင်ကြရန် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကပ်လျှက်ရှိသည့် ဖူကက်လေဆိပ်ကိုလည်း ငလျင်လှုပ်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာ၌ ပိတ်ထားလိုက်သည်ဟု သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ညနေ ၅နာရီ ခွဲဝန်းကျင်ထိ မည်သည့် အရေးပေါ် သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသေးပေ။
ယခုလ ကိုးရက်နေ့ထုတ် Bangkok Post သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားပြီး၊ အင်တာနက်တွင်ပြန့်နှံ့နေသော ဦးခင်ညွန့်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းမှာ မှားယွင်းနေပြီး၊ ယခုလ ရှစ်ရက်နေ့ထုတ် Bangkok Post သတင်းစာနှင့် အင်တာနက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း သတင်းဆောင်းပါးပါ အချက်အလက် အချို့မှာလည်း မှားယွင်းနေကြောင်း ဦးခင်ညွှန့်နှင့် ရင်းနှီးကာ သူ၏ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဗိုလ်မှူးဟောင်း ၀င်းမောင်မောင်က ယနေ့ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
"နယ်ခရီးကပြန်ရောက်လို့ အဲဒီ သတင်းတွေကို အင်တာနက်မှာ တွေ့ရတော့ ကျွန်တော်က အဘ ဦးခင်ညွန့်ကို မေးမြန်းကြည့်တော့ ငါ ဘယ်နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်နဲ့မှ မတွေ့ဘူးလို့ မင်းကို ပြောထားပြီးသားပဲ လို့သူကပြန်ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်ဆိုတာ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားသတင်းထောက်တွေကိုပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကနေဒါကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးမြင့်ရွှေနဲ့တော့ သူမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတုန်းမှာ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်က ဆုံးပေးတာကြောင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတွေကို လောလောဆယ်အားဖြင့် မရေးဖို့လဲ သူနဲ့ သဘောတူညီထားပါတယ်။ ရေးချင်တယ်ဆိုတောင်မှ လူကြီးကိုပြန်ပြပြီးခွင့်ပြူချက်လေးယူဖို့၊ ခိုင်ခိုင်မာမာလေး သဘောတူညီချက်ယူပါတယ်။ ခုတော့ Bangkok Post သတင်းစာမှာ သူကရေးထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာခွင့်ပြုချက်မှလဲ မတောင်းပါဘူး။ အဲဒီရေးသားချက်တွေထဲမှာ အဘမပြောခဲ့တာတွေ ပါနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဦးမြင့်ရွှေကို အီးမေလ်းကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့လဲ အကြောင်းမပြန်ပါဘူး"ဟုဦးဝင်းမောင်မောင်ကပြောသည်။
အဆိုပါစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတပ်ဖွဲ့ ဒု-တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ၀င်းနိုင်ထွန်းက မိတ်ဆက်အမှာစကားပြောကြားပြီးနောက် ဦးဝင်းမောင်မောင်က စာနယ်ဇင်းသမားများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ စာနယ်ဇင်းသမားလေးဆယ်ခန့်တက်ရောက်ကြသည်။
Myint Shwe... An interview with (U) Khin Nyunt in Yangon.
Story will be in print soon.
March 17 near Rangoon, Yangon
ဒီနေ့ဦးသိန်းညွန့် နဲ့ တွေ့ တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်လောင်းတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ တယ်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်မှာ တစ်နေရာထည်းကို (၇) ပါတီပြိုင်ကြမယ်။ ၄ - ၅ ယောက်တော့
့တွေ့ မေးလိုက်မယ်။ အချိန်မှီရင်တော့ ဘန်ကောက်ပိုစ့် မှာပါလိမ့်မယ်
ဒုရဲမှူးကြီး ၀င်းနိုင်ထွန်းက ဦးခင်ညွှန့်၏ ဘန်ကောက်ပို့စ်အင်တာဗျုးကိစ္စကိုသာ ရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မသက်ဆိုင်သော တခြားမေးခွန်းများ မမေးမြန်းကြပါရန် မီဒီယာများအား ကြိုတင်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
By featured, လင်းသန့် on April 11, 2012 2:25 pm in သတင်း
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ရုံးဟောင်း၌ ယနေ့ကျင်းပသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးခင်ညွန့် သည် ဘန်ကောက်ပို့စ် အပါအ၀င် မည် သည့် ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများနှင့်မျှ တွေ့ဆုံခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဒီပဲယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း ရဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ဒု ရဲမှူးကြီး ၀င်းနိုင်ထွန်း နှင့် ဦးခင်ညွန့်၏ တပည့် ဗိုလ်မှူး ဟောင်း ၀င်းမောင်မောင်တို့က ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်ဟု7day news ဂျာနယ် ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားသည်။
သို့သော် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ဦးခင်ညွန့်နှင့် အမှန်တကယ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ပြုခဲ့သည့်အပြင် သတင်းရေးသားသူ ကိုမြင့်ရွှေ ကိုယ်တိုင် ဦးခင်ညွန့် နှင့် အတူတွဲ၍ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့သေးကြောင်း ဧရာဝတီသို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုသည်။
L-Zaw Sai (facebook)
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွ...
၁၁-၄-၂၀၁၂ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မရောက်မီ ညပိုင်း ( ကန်တော...
ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုလုပ်နေရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည...
သတင်းထောက်တချို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ညစာနဲ့ တည်ခ...
မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်း ဒေသ ဆူနာမီလှိုင်း ရောက်ရှ...